घटस्थापनाकै दिन ‘छक्का पञ्जा ३’ प्रदर्शनमा ! – Everest Dainik – News from Nepal
घटस्थापनाकै दिन ‘छक्का पञ्जा ३’ प्रदर्शनमा !
यी कारणले चल्न सक्छ ‘छक्का पञ्जा ३’
वर्षेनी १०० भन्दा बढी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन हुन्छन्, ती चलचित्रहरुमा कति सफल हुन्छन् त कतिले निर्मातालाई बिल्लीबाड बनाउँछ । हरेक वर्ष नेपाली चलचित्रमा सरदर ५० करोडमाथिको लगानी बालुवामा पानी सहर भइरहेको छ । एकाध चलचित्रले मात्र लगानी उठाएर निर्माताको खल्ती भरेका छन् ।
अहिलेकी अनमोल केसी लिए लगानी उठाउन सजिलो छ नभए ‘नाईँ नभन्नू ल’ र ‘छक्का पञ्जा’ को सिरिज । यसले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई कुन बाटोमा डोहोर्‍याउँदै छ, कसैले हेक्का पाउन सकेका छैनन् । फिल्ममा लगानी बढेको बढ्यै छ तर हलको व्यापार झन् झन् ओरालोलाग्दो छ ।
नयाँ कलाकार र नयाँ नाममा फिल्म बनाएर अब लगानी सुरक्षित हुन मुश्किल बन्दै गएको छ । यही कारण अचेल मेकर्स चलेका कलाकारहरुको भीड लगाएर पुरानै नामको फिल्मको सिरिज बनाउन अग्रसर देखिएका छन् । यसको एक उदाहरण ‘छक्का पञ्जा’ हो । यो नामसँग अपरिचित सायद अब नेपाली छैनन् ।
पहिलो सिरिजले नेपाली फिल्म इतिहासमै सर्वाधिक कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो । १६ करोडमाथि कलेक्सन गरेपछि ‘छक्का पञ्जा’ को सिरिज निर्माण हुने क्रम रोकिएन । दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको सहकार्यबाट चलचित्रको तेस्रो सिरिजको समेत जन्म भइसकेको छ ।
‘६ एकान ६’ र ‘वडा नम्बर ६’ को सफलतापछि दीपक–दीपाले ‘छक्का पञ्जा’ नाममा चलचित्र बनाउन थालेका हुन् । यसको तेस्रो श्रृंखला अर्थात् ‘छक्का पञ्जा ३’ घटस्थापनाको दिनबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउँदै छ । यो फिल्मको व्यग्र प्रतिक्षा गर्ने अधिकतम पारिवारिक दर्शक छन् ।
‘पहिलो नम्बरमा’ र ‘पछि उमेर ढल्किन्छ’ गीतले यो चलचित्रको राम्रो हाइप निर्माण गरेको छ ।
कमेडी भर्सेज कन्टेन्ट ट्रेलरले फिल्मप्रति दर्शकमा कौतुहलता बढाएको छ । दीपाश्री निरौला निर्देशित फिल्ममा देशका प्रसिद्ध कलाकारहरुको अभिनय छ । दीपकराजले फिल्मको कथा लेखेका हुन् ।
यो प्याकेजमा हामी ‘छक्का पञ्जा ३’ चल्ने तीन प्रमुख कारणहरु कोट्याउने प्रयास गर्दैछौं । उक्त फिल्म चल्ने तीन प्रमुख आधार ब्रान्ड नाम, प्रसिद्ध कलाकारको अभिनय र संवेदनशिल विषय (कथा) लाई मानेको छ ।
आउनुहोस् छोटकरीमा चर्चा गरौं–
‘छक्का पञ्जा’ आफैंमा एक ब्रान्ड हो । यो नामले प्रदर्शनको सुरुवाती दिनमा हलमा दर्शकको खाँचो हुन दिने छैन । दुई सिरिजमा यो देखिएको कुरा हो । ‘छक्का पञ्जा ३’ मा पनि यो दोहोरिनेमा दुईमत छैन । ब्रान्ड नाम र गीत-संगीतका कारण फिल्मको इनिसियल बक्सअफिस बम्पर हुने फिल्मी पण्डितहरुको पूर्व अनुमान छ ।
कलाकारका कारण पनि फिल्मको इनिसियल बक्सअफिसको अंकमा ठूलो अर्थ राख्छ । दर्शकको एक ठूलो वर्ग गिनेचुनेका कलाकार भएका कारण पनि हलसम्म पुग्ने गरेका छन् । केदार घिमिरे, जितु नेपाल, दीपकराज गिरी, बुद्धि तामाङ, स्वस्तिमा खड्का, प्रियंका कार्की, बर्षा राउत, संयोग कोइराला लगायतका कलाकारहरुको ‘छक्का पञ्जा ३’ मा अभिनय छ ।
यो सिरिजमा फिल्म ‘ऐश्वर्य’ बाट सुन्दरता र अभिनयको सर्वाधिक तारिफ बटुलेकी अभिनेत्री दीपिका प्रसाईँ प्रमुख भूमिकामा छिन् । अभिनेत्रीद्वय साम्राज्ञी आरएल शाह र जसिता गुरुङले रिजेक्ट गरेपछि उनको भाग्य बलेको थियो । मल्टिस्टार फिल्म भएका कारण पनि ‘छक्का पञ्जा ३’ बक्सअफिसमा चम्किने धेरैको विश्वास छ ।
संवेदनशिल विषय (कथा)
दर्शक र समीक्षकको एउटा आरोप थियो, ‘छक्का पञ्जा’ जोक्सहरुको भण्डार हो ।’ ‘सिक्न होइन हाँस्न जानुस्’, यसैलाई मुलमन्त्र मानेर ‘छक्का पञ्जा’ का दुई सिरिज बने । तर, तेस्रो श्रृंखलामा टिमले कन्टेन्टमा चुनौती मोलेको छ । हँसाउन मात्र होइन फिल्मबाट सन्देश दिन खोजिएको छ, जुन ट्रेलरबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जातीय विभेद, विद्यालयमा हुने राजनीति, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी जस्तो संवेदनशिल विषयमा फिल्म बनेको छ । निर्माण टिमका लागि यो कन्टेन्ट विकाउनु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ भन्दा कम हुने छैन । यसअघि हँसाउनकै लागि फिल्म बनाएकी दीपाश्रीमाथि यसपटक दर्शकलाई सोच्न बाध्य बनाउनुपर्ने चुनौतीको पहाड सामुन्ने छ ।
फिल्मको मेरुदण्ड अर्थात् कथा दरिलो भएको खण्डमा उक्त कन्टेन्टले फिल्मको लाइफटाइम कलेक्सनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । कन्टेन्ट बलियो भएमा फिल्मको ‘वर्ड अफ माउथ’ राम्रो हुन्छ, जुन फिल्म चल्ने प्रमुख आधार बन्न सक्छ । यो कन्टेन्ट बिके पैसा कमाउनकै लागि फिल्म बनाएको आरोपबाट पनि ‘छक्का पञ्जा’ टिम मुक्त हुनेछ ।